Indonezia: Biraon’ny Sampana eny ana Habakabaka
Birao ao amin’ny rihana faha-30
Nahatratra 21 699 ny tampon’isan’ny mpitory teto, tamin’ny 2008. Lasa tery ireo tranon’ny sampana satria nihamaro ny Betelita. Naorina nandritra ny fandrarana koa ireo trano ireo, ka lavitra be an’i Jakarta. Nilaina àry ny sampana lehibe sy akaiky kokoa.
Nividy trano hafa tanteraka noho ilay teo aloha ireo rahalahy, roa taona teo ho eo tatỳ aoriana. Ny rihana faha-30 amin’ny tranobe iray tsy lavitra an’i Jakarta afovoany no novidina. Tranobe misy rihana 41 izy io ary birao daholo no ao. Mbola novidina koa ireo rihana 12 tao amin’ny tranobe iray teo akaiky teo, mba hipetrahan’ny Betelita 80 eo ho eo. Ankoatra izay, dia nividy trano iray misy rihana efatra izy ireo, mba hasiana an’ireo sampan-draharaha samihafa ao amin’ny Betela.
Rihana 12 no misy ny trano fonenan’ny Betelita
Niara-niasa tamin’ny orinasa teto an-toerana ny ekipa mpanao fanorenana avy any amin’ny firenena maromaro, mba hanavao an’ireo birao sy trano fonenana. Hoy i Darren Berg, mpiandraikitra ny fanorenana: ‘Imbetsaka i Jehovah no nanampy anay rehefa sendra olana lehibe izahay. Te hametraka fitaovana fanodinana rano maloto tao amin’ilay toerana, ohatra, izahay, ary nangataka alalana tamin’ny manam-pahefana. Mbola tsy nahalala an’io teknolojia io anefa ry zareo ka nolaviny ny fangatahanay. Niresaka tamin’ny manam-pahefana ambony iray àry ny rahalahy iray tompon-tany. Tonga dia nanaiky an’ilay fangatahana izy, sady nilaza fa natoky tanteraka an’ireo rahalahy.’
“Tsy miafina intsony izahay, ka lasa voamariky ny olona. Hitan-dry zareo hoe natao haharitra eto ny Vavolombelon’i Jehovah”
Notokanana tamin’ny 14 Febroary 2015 ireo tranon’ny sampana vaovao. I Anthony Morris, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, no nanao ny lahateny fitokanana. Hoy i Vincent Ipikkusuma, anisan’ny Komitin’ny Sampana: “Eto amin’ny tanàna maoderina eto Indonezia izao no misy anay sady akaikin’ireo orinasa malaza. Tsy miafina intsony izahay, ka lasa voamariky ny olona. Hitan-dry zareo hoe natao haharitra eto ny Vavolombelon’i Jehovah.”
Komitin’ny Sampana, avy eo ankavia miankavanana: Budi Lim, Vincent Ipikkusuma, Lothar Mihank, ary Hideyuki Motoi
“Mahafinaritra be ny mitory atỳ!”
Nihamaro ny Vavolombelona nifindra teto, tato anatin’ny taona vitsivitsy. Hoy i Lothar Mihank: “Tena ilain’ny firenena hoatran’ny anay ny mpanitatra faritany. Mahatonga ny fiangonana hanana traikefa sy hihamatotra ary hafana fo izy ireny, sady manampy ny mpitory hankasitraka an’ireo rahalahy maneran-tany.” Nahoana izy ireo no nifindra? Ahoana no niatrehany an’izany? Diniho izay nolazain’ny sasany amin’izy ireo.
1. Janine sy Dan Moore
2. Mandy sy Stuart Williams
3. Casey sy Jason Gibbs
4. Mari (anoloana ankavanana) sy Takahiro Akiyama (aoriana ankavanana)
Hoy i Jason sy Casey Gibbs, avy any Etazonia: “Nojerenay tao amin’ny Diary ny salanisan’ny mponina isaky ny mpitory, dia hitanay hoe anisan’ny tany tena mila mpitory i Indonezia. Nisy mpanitatra namanay koa niteny hoe azo antenaina hisy fitomboana be atỳ. Nantsoinay àry ny sampan’i Indonezia, dia i Bali no faritany natorony anay. Vao nisokatra ny faritany miteny anglisy teto tamin’izany, ka afaka niasa avy hatrany izahay. Saika hijanona herintaona izahay, nefa efa telo taona izao izahay no teto. Mbola tsy naheno momba ny Vavolombelon’i Jehovah mihitsy ny ankamaroan’ny olona nitorianay. Tena mahafa-po ny fanompoana atỳ!”
Hoy i Stuart sy Mandy Williams, mpivady efa zokinjokiny avy any Aostralia: “Te hahita olona mangetaheta ny fahamarinana izahay dia nifindra teto Indonezia. Nihaona tamin’ny mpianatry ny oniversite izahay tany Malang, any Java Atsinanana. Nahay niteny anglisy ry zareo, ary an-jatony no liana tamin’ny vaovao tsara. Tian-dry zareo koa ny jw.org. Tsara be ny mitory atỳ.”
Hoy i Takahiro sy Mari Akiyama, mpisava lalana ao Jogjakarta, eto Java: “Tsy dia matahotra loatra izahay eto noho ny tany Japon. Tsara fanahy ny olona sady mahalala fomba. Liana amin’ny fivavahana hafa ny ankamaroany, indrindra fa ny tanora. Indray andro izahay nampiasa latabatra fampirantiana, dia nahapetraka gazety 2 600 teo ho eo, tao anatin’ny adiny dimy!”
Hoy i Dan sy Janine Moore, mpivady 50 taona mahery: “Mitangorona ny olona rehefa mitory izahay. Itsikianay ry zareo dia mitsiky koa. Te hahafanta-javatra fotsiny aloha ry zareo, fa avy eo liana, dia avy eo faly be. Rehefa misy zavatra asehonay ao amin’ny Baiboly dia misy miteny hoe: ‘Azoko soratana ve izany?’ Gaga be ry zareo amin’ny zavatra lazain’ny Baiboly. Herintaona izao izahay no teto nefa nanenina izahay hoe tsy tonga aloha kokoa. Nitady faritany hitoriana izahay dia nahita.”
Tonga teto i Misja sy Kristina Beerens tamin’ny 2009. Misionera izy ireo tamin’izany ary manao ny asan’ny faritra amin’izao. Hoy izy ireo: “Any amin’ny Nosy Madura, any Java Atsinanana, no faritra be Silamo hiringiriny indrindra eto Indonezia. Betsaka anefa no mandray rehefa itoriana. Manajanona ny fiarany ny olona dia mangataka gazety. Hozy ry zareo hoe: ‘Silamo aho fa tiako ny mamaky an’itony. Afaka mahazo fanampiny ve aho ho an’ny namako?’ Mahafinaritra be ny mitory atỳ!”
Masaka hojinjaina ny vokatra
Niisa 60 000 000 teo ho eo ny mponin’i Indonezia rehefa tonga teto Jakarta i Frank Rice, tamin’ny 1931. Efa ho 260 000 000 izany izao, ka tsy mahagaga raha i Indonezia no firenena fahefatra be mponina indrindra eran-tany.
Niavaka koa ny fitomboana teo amin’ny isan’ny mpitory. Mpitory folo sisa no niangana taorian’ny Ady Lehibe II, tamin’ny 1946. Efa 26 000 mahery anefa izy ireo izao noho ny fitahian’i Jehovah. Azo antoka fa mbola hisy ny fitomboana satria 55 864 no nanatrika ny Fahatsiarovana tamin’ny 2015.
Hoy i Jesosy: “Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa iangavio ny Tompon’ny vokatra haniraka mpiasa hijinja ny vokatra.” (Mat. 9:37, 38) Miombon-kevitra amin’izany ny mpanompon’i Jehovah eto Indonezia. Vonona hiasa mafy foana izy ireo mba hanamasinana ny anaran’i Jehovah eto amin’ity vondronosy ity.—Isaia 24:15.